Sandals® Resorts Executive Executive dia ekena ho mpitarika mandray vahiny manerantany
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny Hotely sy Resort » Sandals® Resorts Executive Executive dia ekena ho mpitarika mandray vahiny manerantany
Associations News • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao • People • Resorts • News sustainability • Tourism • Travel Wire News
Adam Stewart dia miditra amin'ny Komity Mpanatanteraka WTTC
Ny filohan'ny Executive Sandals Resorts, Adam Stewart, dia nasaina tamin'ny fomba ofisialy hanatevin-daharana ny Komity Mpanatontosa ny World Travel & Tourism Council (WTTC). Ny fampidirana dia maneho ny fiovana azo tsaboina ary mandroso nataon'i Stewart nandritra ny androm-piainany teo amin'ny sehatry ny asa.
Ny WTTC dia misolo tena ny sehatra tsy miankina Travel & fizahan-tany manerantany miaraka amin'ireo mpikambana ao anatin'izany ny CEO 200, ny seza ary ny filoham-pirenena.
Adama dia mitondra traikefa an-karena niaraka tamin'ny fiaraha-miasa akaiky tamin'ny rainy farany hananganana izay misy ankehitriny, iray amin'ireo marika fanta-daza indrindra amin'ny indostria misy antsika.
Nanome toky i Stewart fa hanohy hampiroborobo indostria maharitra sy misy ifandraisany bebe kokoa noho ny tamin'ny omaly.
"Voninahitra ho ahy ny miditra ao amin'ny Komity Mpanatanteraka ao amin'ny fikambanana iray izay hajaiko hatramin'ny nanombohan'ny asako," hoy izy Adam Stewart, Filohan'ny Mpanatanteraka an'ny Kapaoty Resorts rehetra misy, "Ity ekipa mpitarika ity dia mifantoka tanteraka amin'ny ezaky ny sehatry ny fizahan-tany sy fizahan-tany, ary maniry ny handray anjara aho. Miara-manohy ny fampiroboroboana indostria maharitra sy misy ifandraisany kokoa noho ny tamin'ny omaly isika, amin'ny fampahatsiahivana amin'ireo indostria mpifanila vodirindrina amintsika sy ireo governemanta iraisam-pirenena fa ilaina amin'ny fiainana ny dia. "
Ny fivorian'ny World Travel & fizahan-tany dia misolo tena ny sehatra tsy miankina amin'ny fizahantany sy fizahan-tany manerantany. Ny mpikambana dia misy CEO, seza ary filoham-pirenena 200 an'ny orinasa Travel & fizahan-tany malaza eran-tany avy amin'ny jeografia rehetra mandrakotra ny indostria rehetra. Nandritra ny 30 taona mahery, ny WTTC dia nanolo-tena hampiakatra ny fahatsiarovan-tenan'ny governemanta sy ny besinimaro momba ny lafiny toekarena sy sosialy eo amin'ny sehatry ny Travel & fizahan-tany.
Julia Simpson, filoha & CEO WTTC dia nilaza hoe:
“Faly aho mandray an'i Adam amin'ny Komity Mpanatanteraka ao amin'ny WTTC. Adama dia mitondra traikefa an-karena niaraka tamin'ny fiaraha-miasa akaiky tamin'ny rainy farany hananganana izay ankehitriny, iray amin'ireo marika fanta-daza indrindra amin'ny indostria misy antsika. Ny tenako sy ny fianakaviana WTTC iray manontolo dia manantena ny hiara-hiasa amin'i Adam amin'ny anjara asany vaovao. ”
Adam sy ny rainy "Butch" Stewart
Ny fahitana tany am-boalohany an'ny mpikambana mpanorina ny filankevitra dia tsy miova: ny governemanta dia hanaiky ny fitsangatsanganana sy ny fizahan-tany ho laharam-pahamehana, ny orinasa dia tokony handanjalanja ny toekarena amin'ny olona, ​​ny kolontsaina ary ny tontolo iainana ary ny hikatsahana ny fitomboana maharitra. Ny maha-mpikambana dia misy ny seha-pifaneraseran'ny indostria, manomboka amin'ny kaompaniam-pitaterana ka hatrany amin'ireo mpandraharaha fizahan-tany ka hatrany amin'ireo vondrona mandray vahiny. Ny Executive Council dia misy seza, filoham-pirenena ary Lehiben'ny mpanatanteraka manerana ny sehatry ny fizahan-tany sy fizahan-tany.
Fikambanana an-tsitrapo, mitarika ny ohatra ny leadership WTTC, manolotra ny fotoanany sy loharanon-karena sarobidy mba handrosoana ny hetsika manerantany amin'ity tontolo miovaova ity. Ny mpitarika ny indostria dia nasaina hanatevin-daharana ny Komity Mpanatanteraka hijoro ho tompon'andraikitra amin'ny fanovana sy fanentanana ifotony, hampiroborobo ny dia azo antoka sy mampanan-karena mandritra ny an'arivony taona ho avy.
Sandals® Resorts dia manolotra olona roa amin'ny fitiavana ny traikefa fialan-tsasatra indrindra, Luxury Included® any Karaiba manerana ny 16 amoron-dranomasina mahavariana ao Jamaika, Antigua, Saint Lucia, Bahamas, Barbados, Grenada, ary Curacao fanokafana ny volana aprily 2022. Fankalazana ny 40 taona maro, ny orinasan-trano fandraisam-bahiny malaza rehetra dia manome fampidirana kalitao betsaka noho ny hafa rehetra eto ambonin'ny planeta. Ny Sandals Resorts dia misy ny sonia Love Nest Butler Suites® ho an'ny tsiambaratelo sy serivisy farany; mpivaro-kena nampiofanin'ny Guild of Butlers English Professional; ny Red Lane Spa®; Misakafo 5-Star Global Gourmet ™, miantoka alika toaka ambony, divay misy vidiny ary trano fisakafoanana manokana ho an'ny gourmet; Aqua Centres misy fanamarinana sy fanofanana PADI® manam-pahaizana; Wi-Fi haingana avy amin'ny morontsiraka ka hatrany amin'ny efitrano fatorianao ary ny fampakaram-bady ho an'ny Customizable Sandals. Sandals Resorts dia manome toky ny fandriam-pahalemana ho an'ny vahiny manomboka amin'ny fahatongavany sy ny fiaingany miaraka amin'ny Sandal Platinum Protocols ny fahadiovana, ny fepetra fanatsarana ny fahasalamana sy ny fiarovana ny orinasa namboarina mba hanomezana fahatokisan-tena indrindra an'ireo vahiny rehefa miala sasatra any Karaiba ary koa ny Sandals Vacation Assurance vaovao, programa fiarovana feno fialan-tsasatra manasongadina antoka voalohany amin'ny indostria momba ny fialan-tsasatra hisolo maimaimpoana ao anatin'izany ny sidina ho an'ireo vahiny voakitika tamin'ny fanelingelenana momba ny dia nataon'ny COVID-19. Sandals Resorts dia ao amin'ny Sandals Resorts International (SRI) an'ny fianakaviana, natsangan'i Gordon "Butch" Stewart, nodimandry, izay misy Resorts Beaches izay mifantoka amin'ny fianakaviana. Raha mila fanazavana fanampiny momba ny fahasamihafana Sandals Resorts Luxury Included® dia tsidiho kapa.com.